आज सुन-चाँदीको मुल्य कति? - Himal Dainik
आज सुन-चाँदीको मुल्य कति?
काठमाडौँ १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १०:५५
आज पनि सुनको मुल्य बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। शुक्रबार सुनको मुल्य प्रति तोला ३०० रुपैयाँले बढेको छ । बिहिबार प्रति तोला ९९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज ३ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मुल्य प्रति तोला ९९ हजार तीन सय रुपैयाँ पुगेको छ।
कोरोनाका कारण चैत ११ गतेदेखि बन्द भएको सुनचाँदीको कारोवार जेष्ठ २५ गतेबाट शुरु भए पछि सुन-चाँदीको मुल्य बढ्दै गएको छ। जेष्ठ २५ गते प्रति तोला ८७ हजार ४०० तय गरिएको सुन आजसम्म आइपुग्दा ११ हजार १ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यस साता सुनको मुल्य ३ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
त्यस्तै तेजावी सुनको मुल्य पनि ३ सय ५ रुपैयाँले बढेको छ ।महासंघका अनुसार आज तेजावी सुनको मुल्य ९८ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। बिहिबार तजावी सुनको मुल्य ९८ हजार ५ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
आज चाँदीको मुल्य २५ रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रति तोला १२ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज १२ सय रुपैयाँमा कारोबार हुने महासंघले जनाएको छ।
अघिल्लोनारायणगढ–मुग्लिन सडक एकतर्फी सञ्चालन
पछिल्लोजात्रा पर्वमा भीडभाड नगर्न आग्रह